लहलहैमा बालविवाह, अहिले पछुताउनु बाहेक अरू विकल्प छैन « OsNepal News
डोटी, २६ भदौ : दीपायल सिलगढी नगरपालिका वडा नं ८ का माया विष्टको कक्षा ८ मा पढ्दापढ्दै फेसबुकमा एक युवकसँग चिनजान भयो । सत्र वर्षीया विष्टको फेसबुकको सम्बन्धकै कारण विवाहसमेत भयो । अहिले उनी २० वर्षकी भइन् । भर्खर विवाह गर्ने उमेर भएकी विष्टका दुई सन्तान जन्मिसकेका छन् । अचेल दुई सन्तान पाल्न आफूलाई धौ धौ परेको उनी बताउँछिन् । उनले भनिन् – “फेसबुकले गर्दा लभ पयो । बिहे गरें । अहिले समस्या भयो । कसलाई पीडा सुनाउँ ? सहेर बसेकी छु ।” आफूले सानै उमेरमा गरेका बिहेप्रति अहिले निकै पछुतो छ उनलाई । आँशु पुछ्दै उनले भनिन् – “लहलहैमा लागेर सानै उमेरमा बिहे गरियो । त्यसको परिणाम भोग्दैछु ।”
त्यस्तै जिल्लाको बडिकेदार गाउँपालिका वडा नं ४ मान्नाकापडीका १७ वर्षीय दीपक बोहरा र छिमेकी गाउँकी १४ वर्षीया शर्मिलाबीच पनि फेसबुककै कारण विवाह भयो । बिहे गरेको दुई वर्षमै छोरी जन्मिन् । आफूहरुबीच सधैं भै-झगडा र कलह मात्रै हुने गरेको शर्मिला बताउँछिन् । उनी भन्छिन् – “बुद्धि नपुगेर सानैमा विवाह गरें । अहिले झगडा मात्रै हुन्छ । कसरी जीवन धान्ने होला ? चिन्तामा छु ।”
जिल्लामा हुने यस्ता कुरीतिका विरुद्धमा अभिभावक र बाल क्लब नै सक्रिय हुनुपर्ने डोटीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकनारायण पौडेलको धारणा छ । उनले भने – “बालविवाह, छाउपडी जस्ता कुप्रथा हटाउन नागरिक समाज र अभिभावक सक्रिय नभएसम्म अन्त्य हुने छाँट देखिँदैन ।” दीपायल सिलगढी नगरपालिकाका पूर्वनगर प्रमुख घनश्याम पाठक बालविवाह गरिदिने अभिभावकहरुलाई नै कानूनको कठघरामा नउभ्याएसम्म यहाँ बालविवाह अन्त्य नहुने विचार राख्छन् । कानूनमा विवाह गर्ने उमेर २० तोकिए पनि यसको खासै पालना गरिएको पाइँदैन ।